I-International Philanthropy kunye ne-Charity Lawyers Law & More
Ububele kunye neZiseko zoLuntu
Xa umntu ekhetha ukuqala ububele, elinye lamanyathelo okuqala afanelekileyo kukukhetha uhlobo olusemthethweni olufanelekileyo. Umthetho waseDatshi uyazi izinto ezahlukeneyo ezinokusebenza njengefomu esemthethweni yokupha: isiseko samaDatshi kunye nombutho waseDatshi. Isiseko seDatshi sihlala sikhethwa ngokusekela isisa. Uhlobo lwesiseko seDatshi kukuba ayinamalungu. Ngokusisiseko, isiseko seDatshi kuphela kufuneka sibe ne-organ enye: ibhodi yabalawuli.
Xa umntu ekhetha ukuqala ububele, elinye lamanyathelo okuqala afanelekileyo kukukhetha uhlobo olusemthethweni olufanelekileyo. Umthetho waseDatshi uyazi izinto ezahlukeneyo ezinokusebenza njengefomu esemthethweni yokupha: isiseko samaDatshi kunye nombutho waseDatshi.
Isiseko seDatshi sihlala sikhethwa ngokusekela isisa. Uhlobo lwesiseko seDatshi kukuba ayinamalungu. Ngokusisiseko, isiseko seDatshi kuphela kufuneka sibe ne-organ enye: ibhodi yabalawuli. Isiseko seDatshi sijolise ekufezekiseni injongo ethile njengoko kuchaziwe kumanqaku okufakwa. Le njongo inokufikelelwa ngokufumana iminikelo, ukuqhuba ishishini okanye ukufaka izicelo zezibonelelo. Ukongeza, kuyakwalelwa kwisiseko sokuhambisa inzuzo kubasunguli, abantu abayinxalenye yamalungu ayo kunye nabanye abantu. Iqela lokugqibela ('omnye umntu'), nangona kunjalo, lingafumana iintlawulo lo gama ezi ntlawulo zenziwe ngenjongo yokuzibandakanya okanye yokuzibandakanya, esithetha ukuba isiseko yifom esemthethweni elungeleleneyo ukubumba uthando. Isiseko sinabanikeli okanye amavolontiya. Ngokuyintloko, aba bantu abanalungelo lokuvota. Ngapha koko, isiseko sinokuba nepropathi engashukumiyo, senze amatyala, singene kwizibophelelo kwaye sivule iiakhawunti zebhanki. Isiseko sinokuqhuba nemisebenzi yorhwebo.
Ngokungafaniyo nesiseko, umbutho unamalungu, amanyene kwiNtlanganiso Jikelele. Le Ntlanganiso Jikelele inenani lamandla, njengoko iphakathi kwabanye abaxanduva lokuqeshwa kunye nokususwa kwabalawuli. Ukongeza, amanqaku okufakwa angahlengahlengiswa kuphela yiNtlanganiso Jikelele. Umbutho awunakunikezela ngeniso phakathi kwamalungu awo. Kanye njengesiseko, umbutho unokwenza isenzo ngokusemthethweni njengokuthenga ipropathi. Nangona kunjalo, oku kuyathintelwa kwimeko apho umbutho unokubonwa njengombutho olungekho sikweni.
Phakathi kwesiseko kunye nomanyano kunokubakho iyantlukwano kuxanduva lwabalawuli abanokubakho.
Law & More unamava ekukhokeleni nasekuncedeni ekusebenziseni iziseko zesisa zaseDatshi nezamazwe aphesheya okanye abathengi babucala abaneminqweno kunye neenjongo zobubele.
Sicebisa ngokudala, ngokuseka kwaye sibhalise izibonelelo zedatshi zaseDatshi kunye neziseko ezingezizo zenzuzo. Uncedo lwethu luza kufikelela kuzo zonke izinto zerhafu yamaDatshi, ezomthetho, ezolawulo kunye nemicimbi yokusombulula iimbambano.